Ubuntu Cinnamon iya kuqala ilogo entsha kwiFocal Fossa | Ubunlog
Ubuntu Cinnamon iya kuqala kwilogo entsha kwiFocal Fossa
Iqela eliphuhlayo ICinnamon yoBuntu kunye nabasebenzisana nabo, phakathi kwabo u-Ubuntu Budgie oqaqambileyo, wenze inkqubela phambili enkulu kwezi veki zidlulileyo. Ngokusondela ngoLwesihlanu odlulileyo Inguqulelo yokuqala ezinzileyo Kwento eyaziwa ngoku njenge-Ubuntu Cinnamon Remix kwaye namhlanje basixelele ngotshintsho umbhali weli nqaku aluthatha njengolubalulekileyo noluyimfuneko: bazakuhlaziya i-logo yabo ukuze ibe lula kwaye kube lula ukuyiqonda.
Njengoko ubona kulo mfanekiso ulandelayo, ilogo yentsusa iya kupapasha uphawu lwe-Ubuntu ukugqiba ngeCinnamon (leyo isuka ezintabeni) embindini. Nangona umbono ucacile, ukujoyina iilogo zeCinnamon kunye ne-Ubuntu kwilogo enye kwakuhlala kunzima kakhulu kum. Ukusuka kwinkangeleko yayo, abaphuhlisi be-flavour elandelayo ye-Ubuntu babenemvakalelo efanayo kwaye utshintsho luya kuba yinto yokwenyani ukusukela ngo-Epreli 2020.
Ubuntu Cinnamon iyakwenza lula i-logo yayo
Siza kutshintshela kwi-logo entsha, esebenzayo ukuze iqalise ukusebenza nge-20.04 kwaye ii-icon ziya kutshintsha ngoFebruwari 17th, 2020, unyaka omnye xa iprojekthi iqale isicwangciso sayo sokuba yile nto iyiyo nangoku nangaphaya.
-Ubuntu Cinnamon Remix (@UbuntuCinnamon) Disemba 11, 2019
Siza kutshintshela kwi-logo entsha, eya kuqala ukusebenza nge-20.04/17 kwaye ii-icon ziya kutshintsha ngoFebruwari 2020, XNUMX, unyaka emva kokuba iprojekthi iqale ukucwangcisa ukuba yile nto iyiyo nangoku nangaphaya.
Ngaphandle kokuba ndithethile nabo, mabandilungise ukuba bayandifunda kwaye ndiyaphazama, "isixa" esitsha seelogo siphumela:
Isangqa esinee-slices ezintathu ze-Ubuntu sikhona; ukusika okusezantsi ngasekhohlo kwenziwa ngokwahlulwa kweentaba.
Izangqa / iibhola ezikwi-Ubuntu logo zikhona, kodwa ziba ngoonxantathu abathathu, abasebenza kakuhle kakhulu neentaba.
Iintaba zibonisa ukuba incasa yi "Cinnamon."
Njengoko sinokufunda kwi-tweet epapashwe yi-akhawunti esemthethweni yeprojekthi, utshintsho luya kusebenza kuFocal Fossa, ukumiliselwa okulungiselelwe u-Epreli 23, 2020. Bathembisa ukuba Iimpawu ziya kutshintsha ngoFebruwari 17, ke sinokubona ukuba yonke into iya kuba njani kwimifanekiso (Yokwakha yemihla ngemihla) ekhutshwayo ukusukela ngala mhla. Ucinga ntoni ngotshintsho?
Abo banomdla, unokufikelela kwiwebhusayithi yeprojekthi ukusuka esi sixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » Ezinye iidesika » Ubuntu Cinnamon iya kuqala kwilogo entsha kwiFocal Fossa
Umbono, usetyenziso lwasimahla lokuthatha amanqaku kwiMarkdown
Umboniso weFirefox 3.0 uza nokhuselo lwangasese, ukucinywa kwembali oluzenzekelayo nokunye